accept မလုပ်ပဲ gtalk မှ ချက်တင်လုပ်လာသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » accept မလုပ်ပဲ gtalk မှ ချက်တင်လုပ်လာသူ
accept မလုပ်ပဲ gtalk မှ ချက်တင်လုပ်လာသူ
Posted by etone on Dec 14, 2010 in Know-How, DIY | 16 comments
စိတ်ညစ်ပါတယ် gtalk ရယ်
ရွာသူ၊ရွာသားတို့ရေ သိချင်တာလေးနည်းနည်းရှိလို့ … နားလည်တဲ့လူများရှိရင် ကူညီပေးပါဦး… ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ ။
လူတိုင်းသုံးကြတဲ့ gtalk အကြောင်းအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … အခြားလူက ကိုယ်နဲ့ ပြောချင်တယ် (ချက်တင်လုပ်ချင်တယ်) ဆိုရင် အစဆုံးကိုယ့် gmail address ကိုသိရပါမယ် ..။ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ သူ့ gmail ကနေ ကိုယ့်ဆီကို အင်ဗိုက်လုပ်ရပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘက်မှာ request ပေါ်နေတော့မှ ကိုယ်က ပြောချင်ရင် (ချက်တင်လုပ်ချင်ရင်) accept လုပ်မယ် ၊ မပြောချင်ရင် cancle လုပ်မယ်ပေါ့ ..ဒီအထိလည်း ဟုတ်ပါသေးတယ် ။ သဘောကတော့ …. accept လုပ်ပြီးတော့မှ တစ်ဖက်က အင်ဗိုက်လုပ်တဲ့လူ အွန်လိုင်း သုံးနေရင် အပြန်လှန်ပြောလို့ရပြီပေါ့ .. ။ accept မလုပ်သေးသရွှေ့ တစ်ဖက်ကလူ ဘယ်လိုမှ ကိုယ့် gtalk contact list ထဲဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး… ။ ကဲ … ဒါက အားလုံးသိတဲ့နည်းပါ …။
ဟုတ်တယ်… ဒီမှာလည်း အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ အံ့သြနေတာ.. သိတဲ့သူရှိရင် ပြောပြကြပါအုံး…
အင်… တို့လို့ တန်းလန်း post ပါလား…
ပထမတစ်ခါပို့စ်တင်တုံးကတော့ ချာတူးလန်ကပြောတယ် ၀င်မန်းလို့မရဘူးဆိုလို့ … အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ပို့စ်တစ်ခုလုံးအပြည့်စုံပါတယ် မှန်းလို့သာမရတာ ..။
ဒါနဲ့ comment ပေးလို့ရအောင် edit လုပ်ပြီး ထပ်တင်လိုက်တော့ auto save က အလုပ်လုပ်လိုက်လို့ဒီလိုပုံဖြစ်သွားပါတယ် … Admin ရေ စာတွေဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ ။
အပြင်မှာ အကောင့်သုံးရင် ၀င်လို့ရတဲ့ link တွေများ ထားခဲ့လို့ သူ့ဘာသာ invite လုပ် accept လုပ်ထားလို့ ဖြစ်မယ်။
မဟုတ်ရင်တော့ password ပြောင်းလိုက်တော့။
ဒါတောင်ရ ပါ့မလား မသိဘူး။
ဟုတ်တယ် နွယ်ပင်လဲ အဲလို လိုဖြစ်တယ် ကိုယ်က accept လဲမလုပ်ရဘူး သူကလဲ invite မလုပ်ပဲ လာပေါ်နေတာ ဘာဖြစ်မှန်းတော့ မသိဘူး .. အဲ့လိုဖြစ်တာ (2) ခါလောက်၇ှိပြီ . သိတဲ့ သူများ၇ှိရင် ပြောပြပါဦး ..
ဟုတ်တယ် နွယ်ပင်လဲ အဲလို ဖြစ်တယ် ကိုယ်က accept လဲမလုပ်ရဘူး သူကလဲ invite မလုပ်ပဲ လာပေါ်နေတာ ဘာဖြစ်မှန်းတော့ မသိဘူး .. အဲ့လိုဖြစ်တာ (2) ခါလောက်၇ှိပြီ . သိတဲ့ သူများ၇ှိရင် ပြောပြပါဦး ..
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်Gtalk မှာ Invite မလုပ်ပဲ Mail တွေပို့နေရင် နှစ်ဘက်စလုံးရဲ့Gtalk ထဲမှာ တစ်ဘက်လူရဲ့အကောင့်က abcdef@gmail.com (invite) ဆိုပီးပေါ်နေတယ် ဘာမှမလုပ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး အဲဒါကိုကလစ်လုပ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် တစ်ဖက်ဘက်က Invite လုပ်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို Accept လုပ်စရာမလိုYes တွေ No တွေမပေါ်ပဲနဲ့ တစ်ခါတည်းဝင်သွားရော ခဏခဏကြုံနေရလို့သိနေတာ Technologyပိုင်းလိုအတိအကျကြီးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်:)
အိတုံလိုမျိုး လေးပေါက်ရဲ့post မှာလဲမန်းလို့မရတဲ့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော် !! @_@
ကိုချာပြောသလိုပဲ တစ်ဘက်က အင်ဗိုက်မလုပ်ပဲ မေးလ်တွေပို့နေရင် နှစ်ဘက်လုံးမှာ အင်ဗိုက်ပေါ်နေပါတယ် အဲဒိမေးလ်ကို ကိုယ်က ရီပလိုင်း ပြန်လုပ်လိုက်ရင်တော့ Accept လုပ်စရာမလိုပဲ Auto gtalk ထဲဝင်သွားတတ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်။တစ်ဘက်က Gtalk အင်ဗိုက်ကိုလက်မခံလို့ မေးလ် လှမ်းပို့တာ။ အဲဒါကို ပြန်ပြီး ရီပလိုင်း လုပ်လိုက်မိလို့ gtalk ထဲ auto ၀င်လာတာပါပဲ
ဟုတ်တယ်!! ကျနော်တို့ Reply လုပ်မိတယ်ဗျ
အော ဂလိုလား … ။
ဒီဟာကတော့ရှင်းပါပြီ… မရှင်းတာတစ်ခုက ကိုယ်က ဘလော့လုပ်ထားတဲ့လူက ဟိုဘက်ကနေ သူ့ဘာသာသူဖြေပြီး ကိုယ့်ကို စကားပြန်လာပြောတယ်
အဲ့ဒါကရော ။ သိသေးရင် ပြောပေးပါဦး ။
သူ့ကို လုံးဝ အဆက်ဖြတ်ချင်ရင်တော့ Remove လုပ်ပစ်လိုက်ပါ…
ဒါဆို သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာ အားလုံး ရှင်းပြီပေါ့…
lu ta lone ရေ မင်္ဂလာပါ ။ ပျောက်နေတာကြာပြီနော် ။
remove လုပ်တာက ဂျီတော့မှာဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်က list မှာသာမရှိတော့မှာ သူတို့ဘက်မှာ ကိုယ်က အွန်လိုင်းဆို ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ် ။ gmail contact list ထဲကနေ remove လုပ်ရင်တော့ လုံးဝကို ပျောက်သွားတယ် လို့ လျှောက်ကလိရင်း နားလည်ခဲ့ပါတယ် ။
တဆက်တည်းမေးလိုက်အုံးမယ် Block ထားရင် Mail နဲ့ပို့ပီးပြောလို့တယ်လေ အဲဒီ Mail ထဲမှာပါ ပိတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါလဲခင်ဗျာ၊ Mail ပို့တဲ့လူဆီကို
Mail Delivery System နဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့ပုံမျိုးလေး သိချင်လို့ပါ
ချာတူးလန်ရေ အဲ့ဒါ setting မှာ သွားချိန်ထားလို့ရတယ် ကိုယ့်မေးလ်ထဲတောင်မ၀င်ပဲ filter နဲ့ ပိတ်ထားလို့ရတယ် ။
ko char too lan,
you can delete that you don’t like. If so the massage is atometically to sender mail. I also know
like this. alittle
but that is not sure. you can do it. If you can please sharing all gazette memembers. Thanks
Maw lite tar tet ta lout nae. type ya tar